चुनावको मुखमा केपी ओलीको बचाउ गर्दै योगेश भट्टराईले भने, "माखे साङ्लो भनेको एकदमै बलियो हो, छुट्टिनै नसक्ने"
प्रदेश नम्बर २ मा हुने स्थानीय तहको चुनावमा सबै ठूला दलका नेताहरुले आफ्नो दलले सबैभन्दा धेरै ठाउँमा जित्ने दाबी गरेका छन् । यसअघिको २ चरणको चुनावबाट पहिलो ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेले २ नम्बर प्रदेशमा पनि पहिलो स्थान ल्याउने दाबी गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा ऋषि धमलाले एमालेका सचिव योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । नेपाली रेडियो नेटवर्कका कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको अन्तरवार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा नेकपा एमालेको अवस्था कस्तो छ ?
प्रदेश नम्बर २ का सबै जनताले नेकपा एमालेको पक्षमा मतदान गर्ने भनिरहेका छन् ।
संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिएकाले एमालेप्रति मधेशी जनताको आक्रोस देखिएको छ । कसरी मतदान गर्छन् ?
संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशी जनताले चाहेकै होइनन् । त्यहाँका केही ठूलाठालु मान्छेले चाहेका थिए । मधेशी जनताका लािग संविधान संशोधन प्रस्तावको केही अर्थ नै छैन । जनताले जे चाहेका थिए, त्यो अहिलेका संविधानमा छ ।
प्रदेश नम्बर २ लाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो गढ हो भन्दै दाबी गरेका छन् । माओवादी र मधेशवादी दलले पनि आफ्नो पार्टीले सबैभन्दा धेरै ठाउँमा जित्ने दाबी गरेका छन् । एमालेलाई चुनौति छैन ?
शेरबहादुर देउवाको गढ डडेलधुरामा त जोगाउन सक्नुभएन । जुन दलका नेताले जे भने पनि सबै यो मुलुकलाई ध्वस्त बनाउनतिर लागेका छन् । भौगोलिक फाटो ल्याउने काम अरु दलहरुले गरेका छन् । शेरबहादुर जब जब यो देशको प्रधानमन्त्री भएर आउनुभएको छ, देशमा अनिष्ट भएको छ । अहिले ६० जना जतिको त मन्त्रीमण्डल बनाइसक्नुभयो । केको निम्ती यो काम गर्दै हुनुहुन्छ ? राज्यको ढुकुटी सक्ने काम मात्र भइरहेको छ । जनताको दुःख एकातिर छ, सरकार अर्कोतिर छ ।
नेकपा एमालेले मधेशी जनताको हितमा काम गरेन भन्ने आरोप छ नि ?
हामी पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर २ को सबैजसो ठाउँमा पुगेका छौँ । जनताले एमालेलाई सकरात्मक रुपमा लिएका छन् । बाहिर चलेका हल्ला त एमालेप्रति भ्रम फैल्याउन खोज्नेले गरेको षडयन्त्र हो । तर ति सबै भ्रम अब समाप्त भइसकेको छ । असोज २ गते हुने चुनावमा प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लाका जनताले नेकपा एमालेलाई मतदान गर्छन् ।
मधेश आन्दोलनका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्तिका कारण जनता रुष्ट छन् नि ?
मधेश आन्दोलनमा ४७ जना मारिदा त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । यो कुरा त मधेशी जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ नि ।
गृहमन्त्री त एमालेकै बामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो नि ?
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ४७ जना मरे । त्यसको हिसाबकिताब पनि होला नि । त्यसपछि एमाले प्रधानमन्त्री भएर आएपछि त मधेश आन्दोलन साम्य हुँदै गएको हो ।
उपेन्द्र यादवले त एमालेलाई मधेशमा भोट माग्ने नैतिक अधिकार छैन भन्नुभयो । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
लोकतन्त्रमा कसलाई नैतिक अधिकार हुन्छ, कसलाई हुँदैन त्यसमा बहस गर्ने कुरा होइन ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर २ को चुनावका लागि त्यस क्षेत्रमा देखिनुभएको छैन । किन ?
अध्यक्ष ओलीको प्रदेश नम्बर २ का विभिन्न स्थानमा कार्यक्रम हुन्छ । प्रमुख ठाउँहरुमा पार्टी अध्यक्षको चुनावी कार्यक्रम हुन्छ ।
केपी शर्मा ओलीले मधेश आन्दोलनका क्रममा बनाइएको मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्नुभयो । आन्दोलनका क्रममा मरेकालाई झरेका आँप भन्नुभयो । यि कुराले मधेशी जनता रुष्ट छन् । के भन्नुहुन्छ ?
माखे साङ्लो भनेको के हो ? तपाईलाई के थाहा छ ?
तर उहाँले होच्याएर बोल्नुभयो भन्ने जनताको बुझाई छ नि ।
माखे साङ्लो भनेको ऋषि धमलाजिले के बुझ्नुभयो ?
केही पनि होइन । यो सानो साङ्लो हो भन्ने अर्थमा ओलीले भन्नुभएको होइन ?
होइन, तपाई नेपालको शब्दकोष हेर्नुस् । माखे साङ्लो भनेको एकदम बलियो हो । छुट्टिनै नसक्ने । तपाईले नेपाली शब्दकोष नै पल्टाउनुभएको छैन ।
तर ओलीले झरेको आँप हो । २,४ जना मर्दैमा केही हुँदैन पनि भन्नुभयो नि ?
त्यस्ता शब्दहरु पल्टाएर राजनीति गर्ने होइन । मधेश केन्द्रित दलका नेताहरुले पनि एमालेलाई के भनेका छन् ? त्यो सबै कुरा पल्टाएर राजनीति हुँदैन । कति गाली गलौज गरे, कति ठाउँमा पुत्ला जलाएका छन् । एमालेको कार्यालयमा तोडफोड भएको छ । त्यो सबै इतिहास पल्टाउने हो ? नेकपा एमालेमाथि कति ज्यादति भएको छ भन्ने कुरा तपाई ८ दिनसम्म प्रदेश नम्बर २ मा घुम्दा पत्ता लगाउनुभएन ?
असार २५ गते नै मन्त्रिपमण्डल विस्तार हुन्छ : दिपक खड्का
मापदण्डविपरीत करोडौं ‘आर्थिक सहायता’ वितरण
भागबन्डाका विषयमा कुरा नमिल्दा एमाले र माओवादी एकता अड्कियो
संघीयता कार्यान्वयनका लागि समृद्धि आवश्यकः अध्यक्ष यादव
मदन भण्डारीको प्रशंसा गर्दै पुष्पलाललाई जडसुत्रवादी किन भने माधवकुमार नेपालले ?